AKHRISO:-Guddiga Arimaha Dibadda Baarlamaanka oo Madaxweynaha u gudbiyay Warqad ku saabsan khilaafka dalalka Khaliijka | Saadaal Media
AKHRISO:-Guddiga Arimaha Dibadda Baarlamaanka oo Madaxweynaha u gudbiyay Warqad ku saabsan khilaafka dalalka Khaliijka
War Qoraal ah oo ka soo baxay Guddiga Arimaha Dibadda ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa walaac looga muujiyay Go’aanka ay dowladda Federaalka Soomaaliya ka qaadatay Khilaafka u dhaxeeya Wadamada Khaliijka.
Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha dibadda ee Golaha shacabka C/qaadir Cosoble Cali ayaa Madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay warqad ku saabsan khilaafka dalalka Khaliijka iyo aragtida ay ka qabaan Gudiga Go’aanka dowladda.
Gudiga arimaha dibada ma waxay u ola’olaynayaan inay Lakala saftaan laba wadan oo u siman? Dadka Somaliyeed ee ka shaqaysta Qadar wixii dhib ah oo soo gaara ma siyaasiintaa kamasuula? Wadama badan baa dhexdhexaada sida Kuwait, Madaxweynuhu wuxuu qaatay go’aan kii ugu fiicnaa.